Astaanta Sadex-Geeslay “Pyramid” - Land Of Punt
Hadii aynu si kooban usoo qaadano astaanta looyaqaan sadex geeska “The Pyramid” oo astaan u ah shirkado badan iyo ururo hadaf qarsoon leh ayaa ah astaamaha dunida ugu caansan ee isha biniadamku taqaan. Waxaa astaan xambaarsan ujeedo gaara oo cilmi sir ku jirto siyaabo farshaxnimo ku jirto ayaana loo soo bandhiga waxaan fasira aqoonyahano ku xeel dheer aqoonta cilmiga turjumida astaamaha “SYMBOLISM”.
Sadex-geeska “Pyramid” waa astaan qadiimiya oo ummadihii inaga horeeyey isticmaali waxaan aqoonyanka fasirada cilmiga ay xambaarsan tahay astaantanu raadkeeda gashaan raaca taarikhda fircooniyiinta “Chaldeans” iyo nawaaxiga Masar. Astaanta sadex geeska waxay ku ku xardhantahay dhagxaanta qadiimiga ah iyo darbiyada goobihii ay fadhiyi jireen soo shaacbaxday boqortooyadi fircooniyada.
Astaanta Sadex- geeslay (pyramid)
Fircooniyiintii oo taarikh dheer lahaa ayaa lagasoo soo xigtay waxayna astaan u ahayd ciidanka sixiroolayaasha ee wakhtigaa ka talinjiray Masar. Intan danbe, astan sadex geeska waxaa dibsoo cusbooneyey shikhsiyaad aan tarikhdu fahmin himiladooda iyo ururo qarsoon “secret socities” boqolaal sano soo jirey ayaa astaantan qaatay oo casriyeeyey. Ururada astaanta sadex geeska qaata ayaa afkaar ahaan aminsan maysooniyada intabdan shirkadaha calaamdan sitana waxaa iska leh shikhsiyaad kasoo jeeda maysooniyada.
astaan ataar qadiim calaamad iluminati Pyramid ururada hadafka qarsoon leh